शासनमा पारदर्शितालाई चुनौति
ओजस्वी गौतम, अधिवत्ता मङ्गलबार, फागुन २१ २०७५
राज्यले वितरण गर्दै आएको सेवा र सुविधाको अनुपातमा विकासको स्तर र परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि यसमा कोही पनि सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन । बरु उल्टै संस्थागत भ्रष्टाचारसँगै तल्लोस्तरमा व्याप्त हाकाहाकी घुस खाने, ठग्ने, लुटने प्रवृत्तिमा पनि बढोत्तरी हुँदै आएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणमा राजधानीको यातायात क्षेत्रको एक हिस्सा ट्याक्सिको सेवालाई लिन सकिन्छ । अहिले राजधानीमा चल्ने ट्याक्सिको पछाडिको सिसामा नानाभातिका कुरा लेखि मिटर नचलाई यात्रुसँग प्रत्येक गन्तव्यका लागि तेब्य्राएरसम्म भाडा असुल भई रहेछ ।
शासन सञ्चालनमा पारदर्शिताको झिनो विम्बले मात्र प्रवेशको अवसर पायो भने सत्ता सञ्चालन संसदमा मात्र होइन जनसमक्ष पनि पक्ष र विपक्षमा विभाजन भई हाल्छ । यो विभाजनले शासन सञ्चालनमा प्रतिष्पर्धा, स्वच्छता एवं विकासको गुणस्तरीय निरन्तरतालाई प्रवद्र्धन गर्छ । अन्तमा यसबाट सर्वसाधारण जनतानै बढी भन्दा बढी लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । अर्थात शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता त्यस्तो लुब्रिकेन्ट हो जसले शासनको तमाम विक्रितिलाई आफैभित्र डढाई राजनीतिक शद्धिकरणलाई यथावत रहन सहयोग गर्छ ।
दलिय व्यवस्था आफैमा एक पारदर्शि व्यवस्था हो, भलै हाम्रा दलिय नेताहरुले आ–आफ्नो राजनीतिक सहजताका लागि भागवण्डामा आधारित राजनीति गरुन या स्थानियदेखि राष्ट्रिय विकासका योजनाहरुमा मिलिजुली जाने फर्मुला विकास गरुन व्यवस्थामा घुसाइएको पारदर्शिताको विम्वले काम नगरेको भन्न मिल्दैन । तर, समस्या के छ भने पारदर्शिताले उत्खनन गरेको अनियमितता वा यथार्थ अवस्थालाई समेत दबाउन, धम्क्याउन र सिद्धयाउन पछि नपर्ने राजनीति हावी भएपछि यसको नियन्त्रण भनौ या यसको बाईप्रडक्टका रुपमा विकसित भैरहेको संस्थागत भ्रष्टाचारको सामना कसले गर्ने भन्ने ठूलो चुनौति नेपाल जस्ता अल्पविकशित देशमा रही रहनु स्वाभाविक छ, किनभने साधन स्रोत, पहुँच, प्रेस लगायत सरकारका संयन्त्रहरु पारदर्शिताको विपरित नीतिगत भ्रष्टाचारीको पक्षमा जानी नजानी उपयोग भैरहेका हुन्छन ।
राज्यले वितरण गर्दै आएको सेवा र सुविधाको अनुपातमा विकासको स्तर र परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि यसमा कोही पनि सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन । बरु उल्टै संस्थागत भ्रष्टाचारसँगै तल्लोस्तरमा व्याप्त हाकाहाकी घुस खाने, ठग्ने, लुटने प्रवृत्तिमा पनि बढोत्तरी हुँदै आएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणमा राजधानीको यातायात क्षेत्रको एक हिस्सा ट्याक्सिको सेवालाई लिन सकिन्छ । अहिले राजधानीमा चल्ने ट्याक्सिको पछाडिको सिसामा नानाभातिका कुरा लेखि मिटर नचलाई यात्रुसँग प्रत्येक गन्तव्यका लागि तेब्य्राएरसम्म भाडा असुल भई रहेछ । सरकारको नाकै मुनी ट्याक्सि सञ्चालकहरुले गरी रहेको यो लुट यति निर्वाध र सहज तरिकाले सञ्चालन भई रहेको छ कि उसलाई कसैले किन भनेर प्रश्न गर्ने आँटसम्म गरेका छैनन । ट्याक्सि सञ्चालकलाई खुला लुटको यो अनुकुलता सरकारी असक्षमताको कारण हो या शासनमा माफियाकरणको कारण हो ? सरकार यसको जवाफदेहिताबाट उम्कन सक्दैन ।
विधिसम्मत शासनको कुरा भाषणमा मात्र सिमित हुँदै जाने, तर शासनका अवएवहरु भने भ्रष्टाचारमा लिप्त रहँदै बस्ने हो भने यो शासकिय सभ्यताको विरुद्ध हुन जान्छ । यस प्रकारको शोषणको चक्रव्युह कि त दास युगमा सम्भव थियो होला या अहिले नेपालमा व्याप्त छ । अनियमितता नियन्त्रण गर्ने जागरुकता छैन भने बनेका कानूनले मात्र पनि केही गर्न सक्दैन । अनियमितता नियन्त्रण गर्ने आफैसँगका कानून पढे मात्र पनि कार्वाहीका लागि औंशी पूर्णे कुरी रहन पर्दैन । नेतृत्वमा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति छ भने सभ्य समाजमा जनताका आधारभूत आवश्यकतामाथि राजनीति हुनै सक्दैन ।
सन् ९० को दशकदेखि व्यापक बन्दै आएको विश्वव्यापिकरणले विश्वको राजनीतिक आयामलाई नित दिन नयाँनयाँ स्वरुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । व्यापार अभिवृद्धि, सुरक्षा, राष्ट्रियता, मानवअधिकार, जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी परिचालन जस्ता विषय अहिले राजनीतिको प्रमुख आधार र रणनीतिक सोचको क्षेत्र बन्न आएको छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव र घरेलु राजनीतिको आधारलाई बुझेर विश्वसनियता आर्जन गर्न सक्यो त्यही राजनीति र त्यसकै नेता मात्र सफल हुने अवस्था छ । यस बदलिदो स्थितिलाई हाम्रो नेतृत्वले बेवास्ता गरेर शासनका परम्परागत आधारलाई मात्र समाती आधारभूत आवश्यकतामाथि राजनीति साँध्नु भनेको घोर निराशाको अवस्था हो ।
आधुनिक राज्यका सिद्धान्तमा जनताको सर्वाेपरी हित कितावमा मात्र सिमित रहेको रहेको विषय होइन, यो हाम्रो शासकहरुले किन बुझी रहेका छैनन या बुझेर पनि बुझ पचाई रहेका छन । आज सूचना प्रविधि, पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक पूनर्निमाण लगायतका क्षेत्रमा देखिई रहने चमत्कारपूर्ण क्रियाकलाप यिनै सिद्धान्तहरुको बलमा खडा रहेको सत्यलाई हाम्रो नेतृत्वले स्वीकार गर्न नसकेकै हो । कोठैमा सही पानी जहाज कार्यालयको साइन बोर्ड टाँगे जस्तै समयमै विज्ञान प्रविधि एवं आविष्कार जन्य कार्यमा अलिअलि लगानी छर्न सकेको भए आज नेतृत्व सपनामा पनि नसोचेको विकासमा आनन्द मनाई रहेका हुन सक्थे ।
शासकिय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नाममा भैरहेका अनुत्पादक खर्चको परिणाम सिमान्तकृत नागरिकको छेउसम्म पुग्न अझै कति समय लाग्न सक्छ ? यस्तै प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा उभिएर हेर्दा पनि आजको आवश्यकता प्रविधिगत शासकिय संरचना हाम्रो शन्दर्भमा अझै लंगडो देखिन्छ । यस्तो संरचनाबाट वितरित हुने सेवा सुविधाको गुणस्तरियताप्रति सँधै प्रश्नहरु तेर्सिरहनु स्वाभाविक पनि हो । यसर्थ, व्यक्तिगत शुभलाभको आकाँक्षामा आत्मकेन्द्रीत राजनीतिको लागि विधिमा आधारित अशल शासन काउसो बनि रहने कुराको बोध नेतृत्वमा हुनै पर्छ । राजनीतिलाई साधन मान्ने नेतृत्वले पुरुषार्थको प्राप्ति गर्नुपर्छ नै भने शासनमा पारदर्शिताको एकल शुत्रलाई आत्मशात गर्दै आफ्ना गतिविधिलाई निरन्तरता दिनु पर्छ । हाम्रो पूर्विय राजनीतिको आदर्श एवं सिद्धान्तले पनि यही कुराको पुष्टि गर्छ ।